iTunes maka Android
1 iTunes maka Android
2 iTunes ka Android
3 YouTube ka Android
4 iTunes Companion maka Android
6 iTunes égwu ka Android
7 iTunes Audiobook ka Android
8 iTunes ebook ka Android
9 Music ka Android
10 Music Echekwala maka Android
11 Atụmatụ maka Android égwu
12 Download Music N'iwu
14 Nyefee Music ka Android
Ọ bụrụ na ị nọwo na-a ogologo okwu iOS ngwaọrụ onye ọrụ, ọ bụ eleghị na ọtụtụ ndị gị dijitalụ music collection na-emerụ elu na iTunes. Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịkwaga ọhụrụ ịta ahịhịa na ihe gam akporo ngwaọrụ, ị ga-achọghị atụgharị gị azụ gị dị oké ọnụ ahịa music collection na na-echekwara na iTunes music n'ọbá akwụkwọ. Ọ bụ ezie na e nweghị iTunes mepụtara maka Android, e nwere ihe ole na ole ụzọ dị iche iche na-esi gị uzo na site na synching iTunes na Android.
The ike chere ihu Android ọrụ iji iTunes
Ebe ọ bụ na iTunes bụ ihe Apple si ukara ngwa, ọ na-aghọ a grueling chore maka gam akporo ọrụ na-awụgharị iTunes site na ha ngwaọrụ. Ndị bụ isi na nsogbu chere ihu na-eji iTunes site Android ngwaọrụ na-depụtara n'okpuru:
• Mgbe iwebata iTunes Plus, ị pụrụ nanị-egwu music na gị Android ngwaọrụ na-zụrụ iTunes na AAC usoro. Ndị ọzọ nile music faịlụ dị iche iche na faịlụ formats ga-kwalite ka Android-dakọtara format maka $0.30 kwa music faịlụ.
• All video faịlụ na-akwụ ụgwọ ma ọ bụ zụrụ si iTunes nwere Digital Rights Management (DRM) mmachi echiche ha site Apple. Ebe ọ bụ na Android anaghị akwado Apple si DRM, video faịlụ adịghị na na na Android ngwaọrụ. Otú ọ dị, vidiyo na-weghaara site na smartphone igwefoto nọ Android akwado format otú nwere ike anya na-enweghị ihe mgbochi.
• Dị nnọọ ka Mac version nke a omume ada ada-agba ọsọ na Windows, N'otu aka ahụ, i nwere ike na-agba ọsọ iOS ngwa ọdịnala na gị Android ngwaọrụ.
• Reading akwụkwọ na-zụrụ Apple si iBookstores bụ a dịghị-aga n'ihi na gam akporo ọrụ dị ka mma.
The Best iTunes Companion maka Android - Wondershare TunesGo
TunesGo site Wondershare bụ nnọọ kasị mma enyi n'ihi na onye ọ bụla nwere Mac na Android ngwaọrụ n'otu oge. Na TunesGo i nwere ike esi ísì ọ bụla ekpomeekpo nke iTunes site na gị Android ngwaọrụ ma zere nsogbu mere n'ụzọ ndị ọzọ. The software etịbede mgbochi nke na-abụghị ndakọrịta na-ahapụ ndị gam akporo ọrụ awụgharị iTunes dị nnọọ ka ihe iOS ngwaọrụ.
Wondershare TunesGo atụmatụ dị ka na-esonụ:
• Easily mmekọrịta niile media faịlụ site na iTunes na gị na Android ngwaọrụ.
• mmekọrịta ozi echekwara n'ime metadata nke mgbasa ozi faịlụ dị ka artists 'aha, album cover nkà, wdg
• Nyefee data dị ka ozi, kọntaktị, photos wdg n'etiti gị Mac na Android ngwaọrụ na mfe ikpuru-na-dobe usoro.
• Ị nwere ike mmekọrịta dum furu efu ọmụma si gị gam akporo ngwaọrụ azụ n'ime gị Mac bụrụ na gị iTunes n'ọbá akwụkwọ tụfuru ndị data.
• Get free upgrades maka ndụ nke mere na unu anọgide emelitere na ọhụrụ atụmatụ na ọrụ na ọhụrụ nsụgharị nwere.
Olee otú Jiri Wondershare TunesGo
Ị nwere ike iji iTunes na gị gam akporo ngwaọrụ eji Wondershare TunesGo. Iji mee nke a ị ga-mmekọrịta iTunes na gị gam akporo ngwaọrụ ọ bụla ọzọ. The mmekọrịta-enyere gị aka mfe nyefee media faịlụ na ndị ọzọ data si iTunes ka Android ngwaọrụ na osote itughari.
Ka mmekọrịta iTunes n'ọbá akwụkwọ si Mac ka Android:
1. Na na wụnye Wondershare TunesGo na gị Mac ngwaọrụ.
2. Mwepụta arụnyere ngwa.
3. Pịa mmekọrịta taabụ si n'etiti ngalaba nke interface.
4. Site mmekọrịta window, họrọ mmekọrịta iTunes ka Android nhọrọ.
5. Site dịnụ gbasaa nhọrọ, họrọ nchekwa na ị chọrọ ka mmekọrịta si iTunes ka Android.
Rịba ama: The Niile Library nhọrọ họrọ ndabara. Ị nwere ike ịhapụ ya dị ka ọ bụ ma ọ bụrụ na ị chọrọ ka mmekọrịta gị dum iTunes n'ọbá akwụkwọ na gị android ngwaọrụ.
6. Ozugbo ị nwere akara chọrọ nchekwa, pịa mmekọrịta button na ala nke interface.
Rịba ama: The mmekọrịta button-aghọ dị naanị na zụrụ (zuru version) oyiri nke ngwa.
Rịba ama: I nwekwara ike mmekọrịta gị Android ngwaọrụ iTunes site na-ahọpụta mmekọrịta Android ka iTunes nhọrọ si mmekọrịta window.
Ozugbo i synched iTunes na gam akporo ngwaọrụ ọnụ, ị pụrụ ịmalite ekerịta faịlụ n'etiti ha.
Iji nyefee faịlụ site na iTunes ka Android:
1. Na Wondershare TunesGo si interface, jide n'aka na ị na-na Dọrọ & dobe taabụ.
2. Họrọ media faịlụ gị iTunes n'ọbá akwụkwọ na ị chọrọ nyefee gị Android ngwaọrụ.
3. ịdọrọ họrọ faịlụ site na iTunes na dobe ha ka ha meghere Dọrọ & dobe ngalaba na TunesGo window.
4. Ị nwere ike ịlele synching ọganihu nke faịlụ n'okpuru Ọganihu taabụ.
Wondershare TunesGo-enye gị ohere jikọọ na Toggle n'etiti otutu ngwaọrụ n'otu oge. Ruru ka ndị a niile mma, ngwa emeela ndị kasị elu kpakpando Fim si ọgwụgwụ-ọrụ-eme ka ọ otu nke kasị mma enyi n'ihi na Android ngwaọrụ ka mmekọrịta na iTunes.
5 Ihe Ị Mkpa Ịmata Ihe Ike resetting Samsung ekwentị mkpanaaka na
Siri VS Google Ugbu a VS Cortana: nke bụ Best
Top 5 Android ebe nchekwa Management Ngwá Ọrụ Iji nweta ihe kasị ebe nchekwa nke Android
Olee otú Naghachi ehichapụ Photos si Samsung Galaxy Ace
Olee otú Naghachi ehichapụ Data si Samsung Epic 4G Touch
Olee otú Naghachi ehichapụ Photos si HTC itu n'anya 4G
> Resource> Android> The Best iTunes Companion maka Android